के MCC पास हुन्छ त ? भीम रावलले गरे यति ठुलो खुलासा – Paluwa Khabar
साउन १३, २०७८ बुधबार 46
काठमाडौं । शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि अब एमसीसी पास हुन्छ की भन्ने विषयमा सबैको चासो बनेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला यसवारे सम्झौता भएको थियो ।
ओली सरकारले एमसीसीलाई संसदवाट पास गराउन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विभिन्न क्षेत्र र केही राजनीतिक दलले एमसीसी पास हुन नहुने भनाई राख्दै आएका छन् ।
अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोग प्याकेज एमसीसी राष्ट्रका लागि घातक भएको तर्क दलका नेताहरुको छ । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौता देउवाले नै पारीत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् की भन्ने सर्वत्र चासो छ।
यस विषयमा गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित नगर्न प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्याकेज एमसीसीका विभिन्न प्रावधान नहटाई अनुमोदन गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालको हितविपरीत राखिएका एमसीसीका प्रावधान अटाएर मात्र अनुमोदन गर्न उनको आग्रह छ । उनले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताविपरीतका प्रावधान नहटाई एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्नु राष्ट्रघाती काम हुनेछ। यस्तो काम सरकार र पार्टीले नगरून्उ नले भनेका छन्य सबारे प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि भएको गठबन्धनमा पनि कुनै कुरा नभएको हेक्का रहोस्
Prevनेपालमा अनलाइन गेम ब’ न्द पब्जि, फ्री-फा’ एर लगाएत अन्य गेमहरुमा प्र’ तिबन्ध (कुन कुन गेम परे ?)
Nextमाधव नेपालले अन्तिममा दिए धोका! बैठकमा यस्तो सुनेर देउवा परे छक्क
चीनको यस्तो दा’ दागिरी सगरमाथा आ’ रोहणमा लगायो रोक
महिलाहरूलाई नर्सरि तालिम
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (227)
२.	श्रीमानले फकाएर घर ल्याएको केहि दिनमै २५ बर्षिय गर्भवती रुपाको रहस्यमय मृ’त्यु (42)
३.	कञ्चनपुरमा एम्बुलेन्सले ठ’क्कर दिँदा साइकल यात्री ४५ वर्षीय कृष्णबहादुरको मृ’त्यु’ (40)